चुनाब जितेपछि वडाध्यक्ष ओेझा बेपत्ता ! कहाँ छन् वडाध्यक्ष ओेझा ? – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ जेष्ठ १०, बिहीबार) ०६:५८
रुपा गाउँपलिका २ थुम्कीका वडाध्यक्ष हरिकृष्ण ओेझा सम्पर्कविहीन भएको वडाबासीले गुनासो गरेका छन् । हालै भएको गाउँपालिकाको नागरिक सुनावाइ कार्यक्रममा स्थानीयले वडाध्यक्ष कार्यालयमा नआएको बताएका हुन् ।
वडाध्यक्षमा जितेको केही दिन कार्यालयमा आएको तर त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयले बताएका हुन् । ‘जितेको २-३ दिन वडामा देख्यौं, त्यसपछि कहिल्यै देखेनौं,’ वडा नम्बर २ का बासिन्दा अशोक ओझाले भने, ‘नेपालमा हुनुहुन्छ कि इन्डियामा हुनुहुन्छ थाहा नै छैन ।’
रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले वडाध्यक्ष आफूलाई समेत सम्पर्क नगरेको बताए । उनले भने, ‘मलाईसमेत खबर गर्नुभएको छैन,पोखरातिर हुनुहुन्छ भन्ने खबर छ तर थाहा छैन ।’ कार्यालय वडाध्यक्षविहीन भएपनि वडाबासीको काममा अवरोध नहोस् भनेर कार्यवहाक वडाध्यक्ष खटाएको उनले बताए ।
वडाको कार्यवहाक वडाध्यक्षमा अहिले नन्दलाल ओझाले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकाछन् । जिल्ला समन्वय समितिले वेबसाइटमा राखेको जनप्रतिनिधिहरुको मोबाइलको सूचीमा रहेको वडाध्यक्ष ओझाको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा स्वीचअफ गरिएको छ भन्ने सन्देश आउँछ । Source : समाधान दैनिक
(२०७५ जेष्ठ १०, बिहीबार) ०६:५८ मा प्रकाशित